Omunye yezinganekwane best of Pushkin kubhekwa "Ndodakazi sikaKaputeni", echaza izenzakalo kwesikhathi ongumlimi ukuvukela 1773-1774. Umlobi wafuna ukubonisa hhayi kuphela ingqondo, ubuqhawe kanye ithalente ngumholi we isihlubuki Pugachev, kodwa futhi ziveza indlela nasezimweni ezinzima ukushintsha uhlamvu zabantu. Isici Maria Mironova ka "Ndodakazi uKaputeni sika" ikuvumela ukulandelela ukuphindukuzalwa amantombazane kusukela igwala dolobhana ngendlela, Heroine uhambisane nesibindi wokuzidela.
Kubi Kubi uMlobokazi, unqobe isiphetho
At ekuqaleni kwendaba umfundi uvezwa unamahloni, intombazane ngobugwala owadubula ngisho esabe. Maria - indodakazi Usigaxamabhande of Fort Belogorsk. Wayehlala yedwa futhi njalo ivaliwe. Leli dolobhana babengenalo suitors, ngakho umama ayinandaba ukuthi uzohlala i umakoti angunaphakade dowry wayengeyena ekhethekile: umshanelo, ikamu kodwa hit imali jackpot. Abazali wayethemba ukuthi kuyoba ngumuntu olungileyo, abangathanda bashade nabo ngaphandle Isipho.
Maria Mironova isici "Ndodakazi uKaputeni sika" usikhombisa yeka kancane kancane washintsha emva umhlangano Grinev, ubani amthandayo ngayo yonke inhliziyo yakhe. Umfundi uzobona ukuthi le nkosazana ongenabugovu abasha ofuna nje injabulo futhi akafuni ukuba zishadele imali. On sipho Shvabrin Masha enqaba ngoba indoda Nokho obuhlakani ocebile, kodwa musa enhliziyweni. Ngemva Duel nge Shvabrin Grinyov walimala, Mironov akamshiyanga esisodwa, vyhazhivaya nesineke.
Lapho uPetru eqaphela indlela ntombazane uthando, yena lembula imizwa yakhe kuye, kodwa kudinga lover ukuze athole isibusiso kubazali bakhe. Green abakutholanga ukwamukelwa, ngakho wahlukana naye Maria Mironova. indodakazi sikaKaputeni wayekulungele give up injabulo yabo, kodwa ngokumelene izifiso abazali ukuba ahambe.
ubuntu Strong ngokugqamile
Maria Mironova isici "Ndodakazi uKaputeni sika" lembula indlela asibona ngayo umlingiswa kwashintsha kakhulu ngemva kokubulawa labazali bayo. Ubethula ethunjwa Shvabrin, okuyinto edingekayo yakhe abe ngumkakhe. Masha wayezimisele ukuthi ukufa ungcono kunokuphila ne engathandwa. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi sithumele Grinyov, ngubani kanye Pugachev bamkhulumela. UPetru wathumela othandekayo akhe kubazali bakhe, futhi wasala ukulwa. indodakazi sikaKaputeni Masha bathandile Grinyova uyise nonina, babethanda wakhe ngayo yonke inhliziyo yami.
Ngokushesha kwafika izindaba kokuboshwa uPetru, wavuka akazange abonise imizwa nemizwelo yazo, kodwa ngaso sonke isikhathi ukucabanga nendlela khulula ethandekayo. Unamahloni, abangafundile ezweni intombazane iphenduka ibe intokazi ezethemba, ilungela ukulwa kuze kube sekupheleni bajabule. Kulapha isici Maria Mironova ka "Ndodakazi uKaputeni" kufana nokuzikhandla umfundi izinguquko ezinkulu isimo sengqondo nokuziphatha Heroine. Waya Petersburg ukuze iNdlovukazi, ukubuza ukuxolelwa for Grinyova.
Ngo Tsarskoye Selo, Maria ihlangabezana intokazi esiphawulekayo owatshela ngesikhathi ingxoxo mayelana okubangela usizi lwakhe. Axoxa nabo wakhe njengomuntu ofana nabo, ngisho alinge ukuphikisa nokuphoqelela phikisana. umngane elisha elithenjisiwe Mironova ufaka nezwi lakhe ukuze iNdlovukazi, futhi kuphela edilini ngesikhathi Regent Maria uthola engumyeni wakhe. Umfundi Cabangisisa Yiqiniso, sizohlaziya kanjani isimilo indodakazi likakaputeni washintsha kulo lonke indaba, futhi le ntombazane namahloni wakwazi ukuthola isibindi futhi siqine ukumelela yena nomyeni wakhe.